जनआस्था बहुउदेश्यीय सहकारीको अध्यक्षमा विष्णु प्रसाद बेल्बासे चयन - Darpanpost
» बैंक/सेयर अंक: 27343
Darpanpost शुक्रबार, पौष २५, २०७६ मा प्रकाशित
बाँके । जनआस्था बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. कोहलपुर ११ बाँकेको १२ औँ बार्षिक साधारण सभा शुक्रवार कोहलपुरमा सम्पन्न भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी भन्ने मुल नाराका साथ शुक्रवार भव्य समारोह बीच साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभामा बार्षिक लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो भने साधारण सभाले नयाँ कार्यसमिती चयन पनी गरेको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापाले गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी थापाले सहकारीको सिद्धान्त अनुरुप अगाडी बढ्न सुझाब दिएका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका प्रवन्धक संचालक नवराज उपाध्याय,जनविश्वास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि। कोहलपुर २ का राम कृष्ण वि।क। लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । सभाको बन्दसत्रले प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन लगायतका प्रस्तावहरु माथी छलफल गरि सर्वसहमत रुपमा पारित गरेको छ ।
संस्थाको १२ औ वार्षिक साधारण सभाबाट विष्णु प्रसाद वेल्बासे अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वा्चित भएका हुन । त्यस्तै सहकारीको उपाध्यक्षमा गीता कुमारी थारु, सचिवमा तेज प्रसाद भण्डारी, कोषाध्यक्षमा शिव डांगी र सदस्यहरुमा माया मल्ल, तारा प्रसाद भुषाल, हर्क बहादुर शाही निर्वा्चित भएका छन ।
त्यसैगरी लेखा समितिको संयोजकमा वेग प्रकाश चन्द, सदस्यहरुमा शर्मिला बि।क र चम्फा वली निर्वा्चित भएका छन । सहकारीको साधारण सभामा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिण्णु बेल्बासेले सहकारीको निति , विधी विद्यान बमोजिम संचालन गर्ने बताएका छन् । साथै कोहलपुर क्षेत्रको परिचित सहकारी भएकाले थप नमूना बनाउदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रमका अवसरमा विभिन्न विद्धामा उत्कृष्ट योगदान पु¥याउने शेयर सदस्य एवं कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा ४ करोड बढीको कारोवारो गरेको जनाएको छ ।